अफगानिस्तानी नागरिकको बढ्दो संख्या पाकिस्तानमा शरण खोज्दै, जनता तालिवानसंग किन डराउँछन् ? « News24 : Premium News Channel
अफगानिस्तानी नागरिकको बढ्दो संख्या पाकिस्तानमा शरण खोज्दै, जनता तालिवानसंग किन डराउँछन् ?
एजेन्सी । तालिवानले अफगानिस्तानलाई नियन्त्रण लिएपछि हजारौं अफगानहरु उत्पीडनको डरले देश छोड्न बाध्य भएका छन्। यस्ता सयौं मानिसहरु चमन सीमा हुँदै पाकिस्तान पुगिरहेका छन्।
चमन पाकिस्तानको एक सानो शहर हो, तर यी दिनहरु त्यहाँ धेरै हलचल छ। हरेक दिन अफगानिस्तानबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरु त्यहाँ पुगिरहेका छन्, जबकि अर्को तिर हजारौं मानिसहरु सीमा पार गर्ने आशामा भेला भएका छन्।
जो पाकिस्तानको सिमानामा आएका छन्, उनीहरुको अनुहारमा राहतसंगै चिन्ताको रेखाहरु पनि देखिन्छ कि अब के हुनेछ ? केही शरणार्थीहरुले बीबीसीसंग आफ्नो अनुभव साझा गरेका छन्। यी शरणार्थीहरुको सुरक्षाको लागि, हामीले उनीहरुको नाम परिवर्तन गरेका छौं।
दुई आमाको कथा
जिरकुन बीबी (नाम परिवर्तन), जो काबुलमा घरबार छोडेर चमन पुगिन्, एक टेन्ट शिविरमा बसिरहेकी छिन् । उनी भर्खरै आएकी छिन्। उनी पर्खिरहेकी छिन् । समुदायका मानिसहरु उनलाई कुनै अज्ञात ठाउँमा लैजान्छन् किनकि पाकिस्तानमा उनको आफ्नै आफन्त छैनन्।
जिरकुन बीबी हजारा समुदायको हो र उनको जीवनमा दोस्रो पटक एक शरणार्थी बनेकी छिन्। तिमि कस्तो छौं भनेर सोध्ने बित्तिकै उनी रुन थालिन्।
उनले भनिन्,’ मेरो मुटु दुखिरहेको छ। मेरो बच्चाको हालत के हुनेछ? मेरो एक्लो छोरा हुन्। उनको एक मात्र छोरा एक ब्रिटिश कम्पनीमा काम गर्दछ र उनी अझै अफगानिस्तानबाट बाहिर निकाल्न सकेका छैनन्। उनी भन्छिन्, जब मेरी बुहारीको हत्या भयो, म लामो समयसम्म राति सुत्न सकिन। मैले सबै बिर्सिसकेको थिएँ।’
जिरकुन बीबीका अनुसार उनकी बुहारी केही वर्ष पहिले हजारा समुदायलाई लक्षित गरी तालिवान बम विष्फोटमा मरेकी थिइन्। ‘तालिवान मानिसहरु धेरै खतरनाक छन्। म उनीहरुबाट धेरै डराउँछु। उनीहरुलाई दया छैन, उनीहरु निर्दयी छन्,’ उनले भनिन्।
जिरकुन बीबीको दुई जवान छोरीहरु उनको पछाडि लुक्छन् । जबकि एक सानो नातिनी उनको काखमा छन्। जाहिर छ, ती सबैको आफ्नै घर पछाडि छोडिएको छ।
उनले भनिन् ‘मैले बुहारीको मृत्यु देखेको छु, त्यसैले मसँग अर्को दुः ख सामना गर्ने साहस थिएन। मलाई मेरो घर वा सामानको कुनै मतलब छैन। मलाई मात्र मेरो छोरा र उनकी छोरीको ख्याल छ। म त्यहाँ कहाँ जान्छु, म के गर्छु? मैले यो केटीकी आमालाई चिहानमा आफ्नै हातले गाडेको छु। बच्चाहरुलाई हुर्काउन धेरै मेहनत लाग्छ, म अर्को सदस्य गुमाउन चाहन्न। ‘
गजनीकी जरमीन बेगम शिया समुदायकी हुन्। उनी केही महिलाहरुको समूहको साथमा पाकिस्तानको सिमानामा पुगेकी छिन्। अफगानिस्तानमा शिया समुदायका मानिसहरुलाई विगतमा तालिवानले निशाना बनाएका थिए। जर्मिन बेगम ६० वर्ष भन्दा माथिका हुन्। ‘तालिवानको शासनमा फर्किएपछि, हामी यति डराएका थियौं कि हामीले सबै कुरा छोडेर भाग्ने निर्णय गर्यौं,’ उनले भनिन्।
यद्यपि जर्मिन बेगमका अनुसार, सीमास्थिति यहाँ राम्रो छैन, महिलाहरुको लागि कुनै गोपनीयता छैन। तर यी मानिसहरुसंग देश छोड्नु बाहेक अरु बिकल्प थिएन।
‘तालिवान फिर्ता भएको छ, हामीलाई डर छ कि आतंकको युग फेरि सुरु हुनेछ। उनीहरु हाम्रा घरहरु खोजिरहेका छन्। उनीहरु सरकारी अधिकारीहरुलाई खोजिरहेका छन्। हामीलाई लाग्छ कि कुनै दिन हिंसाको चक्र सुरु हुनेछ,’ उनले भनिन्।
जिरकुन जस्तै, जारमीन पनि दोस्रो पटकको लागि विस्थापनको सामना गरीरहेकी छिन्। उनले भनि, ‘सन १९८०को दशकमा जवानीको उमेर थियो, त्यसैले परिस्थितिमा समायोजन गर्न सजिलो थियो। अब, केहि दूरी हिँडे पछि, यो सास फेर्न थाल्छ।’
जनतामा कुनै आशा छैन
चमन स्पिन बोल्डक सीमा पाकिस्तान र अफगानिस्तानको बीचको सबैभन्दा व्यस्त क्रसिंग मध्ये एक हो। यस क्रसिंगको माध्यमबाट हरेक दिन हजारौं व्यवसायीहरु एक देशबाट अर्को देश जाँदैछन्। तर आजकल पाकिस्तान आउने मानिसहरुको संख्या धेरै छ।
चर्को घाममा काँधमा धूलो बोकेका सयौं मानिसहरु, बुर्का लगाएका महिलाहरु पनि आफ्ना पुरुषहरुको पछाडि बच्चाहरु समातेरहेको देखिन्छन्। यो तातो गर्मीमा, धेरै आफ्नो खुट्टामा जुत्ता र चप्पल देख्दैनन्। बिरामीहरुलाई एक सामान प्रांमा पाकिस्तान सीमामा ल्याइन्छ। यसमा युवा र महिलाहरु पनि सामेल छन्।
१८वर्षीय जमाल खान काबुलमा कक्षा ११ का विद्यार्थी थिए। उनी तालिवानले अफगानिस्तानमा कुनै प्रतिरोधबिना नियन्त्रण स्थापित गरेपछि उनी निराश छन्। उनले भने, ‘सबैजना आफ्नो घरमा बस्न चाहन्छन्, तर हामी अफगानिस्तान छोड्न बाध्य छौं। हामी पाकिस्तान वा अन्य कुनै देशमा जान मन पराउँदैनौं, सबै चिन्तित छन्, तर उनीहरुलाई आफ्नो देशमा कुनै आशा छैन।’
तालिवानको फिर्तापछि अफगानिस्तानमा महिलाहरुको स्थिति कसरी परिवर्तन भएको छ भन्ने बारेमा जमालले भने, ‘जब म तालिवानको नियन्त्रणमा लिएको दोस्रो दिन काबुलको सडक र बजारमा गएँ, मैले कुनै महिलालाई देखिन। तर कहिले मैले केहि देखे, उनीहरुले आफ्नो सम्पूर्ण शरीर पानाले ढाकेका थिए। ‘
जमालले यो पनि भने कि यस पटक तालिवानले महिलाहरुलाई उस्तै व्यवहार गर्दैनन् जस्तो उनीहरुले अघिल्लो शासनमा गरे, तर महिलाहरु धेरै डराएका छन्।
मोहम्मद अहमार पञ्जशीर उपत्यकाका हुन्, तर हालसम्म उनी काबुलमा अंग्रेजी शिक्षक थिए। उनले काबुलबाट पढाई पनि पूरा गरेका छन्। ‘यो बिल्कुल अविश्वसनीय थियो। इमान्दार हुन, हामीलाई थाहा थिएन कि उनीहरु एक रातमा काबुल कब्जा गर्नेछन्। म अझै पनि मेरो स्कूल र मेरो पढाई त्यहाँ डराउँछु,’उनले भने।
अहमेरका अनुसार तालिबानको ब्यवहार यस पटक फरक छ, तर जो आफ्नो यातना भोग्छन् उनीहरु सजिलै पत्याउन तयार छैनन्। अहमर भन्छन् कि उनीसँग भविष्यको कुनै योजना छैन, तर जे होस्, यो अफगानिस्तानको वर्तमान शासन अन्तर्गत हुने छैन। उनले भने, ‘म जीवन मा मेरो आफ्नै निर्णय लिन चाहन्छु। म स्वतन्त्र हुन चाहन्छु। यसैले म फिर्ता जाँदिन।’
अली चंगेज गजनी मा प्रशासनिक अधिकारी थिए। उनले,भने, ‘ जुन दिन अशरफ घनीको सरकार गयो, उनी अफगानिस्तानबाट बाहिर निस्कन कोशिस गर्दै थिए। उनले यो पनि भने कि उनी सीमामा तीन पटक फर्केका थिए किनकि उनीसँग यात्रा गर्नका लागि आवश्यक कागजात थिएनन्, तर पछि पाकिस्तानी अधिकारीहरुले उनलाई मानवीय आधारमा सीमामा प्रवेश गर्न दिए।’
अली चेंजजीले भने, ‘अहिले जीवित रहनु पहिलो प्राथमिकता थियो, त्यसैले हामीले देश छोड्ने निर्णय गर्यौं। हामी पाकिस्तान आएका थियौं किनकि हामीलाई लाग्छ कि हामी यहाँ सुरक्षित छौं।’
एक पूर्व अफगानी सिपाहीले आफ्नो कान्छो छोरालाई कुरा गर्न लगाए। उनी आफ्नी श्रीमती र तीन छोराछोरीलाई लिएर पाकिस्तानको सीमामा आएका हुन्। उनको बच्चाले भने कि तालिवान को आश्वासन पछि पनि उनको परिवार धेरै डराएको थियो, त्यसैले उनीहरु यहाँ आए।
हामीले सीमामा एक युवा तालिबान लडाकु पनि भेट्यौं। सेतो सलवार कमीज र कालो भेस्टकोट लगाएको यो लडाकुको कपाल लामो थियो र उसको जुँगा काटिएको थियो। उनले भने, ‘तपाइँले मेरो शब्दहरु रेकर्ड गर्नु हुदैन किनकि यसले उनीहरुका बृद्धहरुलाई रिसाउनेछ।’
२४ वर्षीय योद्धाले यो पनि दाबी गरे कि उनी १७ वर्षदेखि तालिवानसंग लडिरहेका छन्। यसले दाबी गरेको छ कि अफगानिस्तानमा पूर्ण शान्ति छ र विदेशी सेनाको प्रस्थानपछि अफगान नागरिकहरुको चिन्ता पनि हटाइनेछ।
उनले यो पनि भने, ‘यो केवल विश्वास र विश्वास को समस्या हो। जनताले छिट्टै यो कुरा बुझ्नेछन्, हामी जे गर्छौं त्यो पूरा गर्नेछौं।’